Beta-Lactoglobulin (9045-23-2) Mpanamboatra - Phcoker Chemical
β-Lactoglobulin no proteinina lehibe amin'ny rononon'omby sy ronono (~ 3 g / l), ary hita ihany koa amin'ny biby mampinono maro hafa …….
Lahatsary Beta-Lactoglobulin (9045-23-2)
Anarana simika β-Lactoglobulin (LG); BLG; β-LG
molekiolan'ny Wvalo 18,300
Application β-Lactoglobulin A avy amin'ny ron-kena bovine no nampiasaina:
• ho toy ny calibrant amin'ny famoretana ny fitaovana TriWave
• ho toy ny fenitra amin'ny fanaraha-maso sy ny fametahana ny β-lactoglobulin amin'ny ronono bovine amin'ny alàlan'ny chromatograma mihetsika avo lenta (HPLC)
• amin'ny fanadiovana sy ny fandrefesana lanjan'ny molekiola santionany protease
β-Lactoglobulin dia nampiasaina tamin'ny famantarana ny karazan-toetra fototarazon'ny κ-casein amin'ny ronono tamin'ny alàlan'ny elektronika elektronika moraelectric.
Beta-Lactoglobulin (9045-23-2) Famintinana
β-Lactoglobulin no proteinina whey lehibe amin'ny rononon'omby sy omby (~ 3 g / l), ary hita ihany koa amin'ny karazana biby mampinono maro hafa; maningana miavaka ny maha olombelona. Manodidina ny 20% ny proteinina ronono bovine no proteinina whey, miaraka amin'ny beta-lactoglobulin lehibe indrindra. β-Lactoglobulin matetika no mpiorina amin'ny vovo-proteinina miorina amin'ny whey.
Ny proteinina varimbazaha dia mety ho alikaola mahavelona. Ny ronono Bovine dia iray amin'ireo zava-maniry matavy misy ny alerenika, indrindra ho an'ny ankizy. Vokatr'izany dia tsy maintsy adidy any amin'ny firenena maro ny fametahana ny beta-lactoglobulin na ronono. Na dia tsy misy fetra an-tsokosoko amin'ny lalàna momba ny proteinina whey aza, fatra-pitandremana azy ireo fa ny mpanamboatra sakafo dia manao fanandramana amin'ny famerenam-bolo be dia be mba hiarovana ny olona simika ary hialana amin'ny fahatsiarovana mifandraika amin'ny alerine.
Inona ny Beta-Lactoglobulin ?
Beta-Lactoglobulin (ß-lactoglobulin, BLG) no proteinina whey lehibe ao anaty ronono tsiranoka ary hita ao amin'ny rononon'ny biby hafa. Manodidina ny 20% ny proteinina ronono bovine dia proteinina whey, ary ny singa lehibe dia beta-lactoglobulin. Ny Beta-Lactoglobulin dia matetika no fampiasa voalohany amin'ny vovon-proteinina miorina amin'ny whey.
Beta-lactoglobulin dia proteinina manerantany ao amin'ny fianakaviana lipocalin. Manana lanjan'ny molekiola 18,300 izy ary misy residu asidra amine 162, ao anatin'izany ny tahan'ny asidra amina amina manga (BCAA).
Ny Beta-lactoglobulin (b-lactoglobulin / BLG) dia iray amin'ireo alerona lehibe amin'ny rononon-kena. Iray amin'ireo proteinina mahazatra indrindra ao amin'ny ronono izy io, ka mahatonga fihetseham-po alikaola, na dia misy proteinina ronono aza ny ankamaroan'ny olona. Ny BLG no proteinina betsaka indrindra ao amin'ny whey, kaontaly 50 isan-jaton'ny proteinina ao amin'ny sekolin'i lactoserum ary eo ho eo amin'ny 10 isan-jaton'ny ronono omby.
Amin'ny ankapobeny, ny globuline dia proteinina kely izay miforitra amin'ny endrika somary somary parabordana, ary ny lactoglobuline dia globuline misy ronono. Rehefa mihena amina ronono ny casein (ohatra, amin'ny rennet na asidra), ny lactoglobulins dia mijanona ao aorian'ny whey (miaraka amin'ny lactalbumin, lactose, mineraly, ary immunoglobulin). Ny proteinina dia eo amin'ny 10% amin'ny solika maina an'ny whey, ary ny beta-lactoglobulin dia manodidina ny 65% ​​amin'izany 10% izany.
Ny Alpha-lactoglobulin dia tafiditra amin'ny synt synt lactose. Ny tanjon'ny beta-lactoglobulin dia tsy mazava, ary na dia afaka mamatotra molekiola hydrofobika kely aza izy, ny tanjona lehibe dia mety ho toy ny loharanon'ny asidra amine ihany. Ny Beta-lactoglobulin dia naseho ihany koa fa afaka mamehy vy amin'ny siderophores ary noho izany dia mety hanana anjara toerana amin'ny ady amin'ny pathogens.
Mahazo tombony ny Beta-Lactoglobulin
Manoloana ny zava-misy fa ny proteinina Whey dia fifangaroan'ny beta-lactoglobulin, alpha lactalbumin, albumin serum bovine, ary immunoglobins. Matetika ny olona dia mampiasa ny whey ho famenony, miaraka amin'ny fanatanjahan-tena amin'ny fanoherana, hanampiana amin'ny fanatsarana ny fitambaran'ny proteinina hozatra ary hampiroborobo ny fitomboan'ny hozatra mahia.
Ny tombontsoa mety hitranga dia ny fihenan-danja amin'ny fanampiana, ny fananana anti-homamiadana, ny fampihenana ny kolesterola, ny asma, ny tosidra ary ny aretim-po, Mampihena ny lanjan'ny olona mitondra otrikaretina.
Tsy toy ny proteinina whey hafa, α-lactalbumin, fa tsy misy fiasa mazava ho an'ny β-lactoglobulin, na dia eo aza ny ampahany lehibe indrindra amin'ny fitambaran'ny sela amin'ireo proteinina eran-tany tafasaraka amin'ny whey (β-lactoglobulin ≈≈, 65%, α-lactalbumin ≈⁠⁠ · 25%, serum albumin ≈⁠⁠–8%, hafa ≈⁠ 2%). Ny β-lactoglobulin dia proteinina lipocalin, ary afaka mamatotra molekiola hydrophobic maro, izay manondro ny anjara asany amin'ny fitaterana azy ireo. Ny β-lactoglobulin dia naseho koa fa afaka mamatotra vy amin'ny alàlan'ny siderophores ary mety hanana anjara asa amin'ny ady amin'ny otrikaretina. Ny homologue an'ny β-lactoglobulin dia tsy ampy amin'ny rononon-dreny.
Ny Beta-Lactoglobulin (BLG) no proteinina whey be dia be amin'ny ronono bovine. LG dia nodinihina be tokoa tamin'ny indostrian'ny sakafo noho ny fiantraikany mahavelona sy fiasa amin'ny zavamananaina isan-karazany.
Ho fanampin'izany, ny BLG dia mety ho otrikaina mpanala be otrikaina mora azo ary mora azo. Ny BLG dia mety ho toy ny otrikaina antioksida izay mora azo sy mora amin'ny fiainana andavanandro. Ny tatitra nataonay teo aloha dia nampiseho fa ny cysteine ​​maimaimpoana ao amin'ny BLG dia mitana andraikitra fiarovana amin'ny toetra mahavelona an'ny ronono. BLG dia tompon'andraikitra amin'ny 50% amin'ny hetsika antioksidan'ny ronono. Tsy ny BLG ihany no afaka mihetsika mivantana amin'ny maha-otrikaina otrikaina azy, fa afaka mitondra antioxidant hafa amin'ny alàlan'ny paosiny mamatotra ligand. Noho izany, mampitombo ny bioavailabilité sy ny habetsahan'ny antioksida misy.
β-Lactoglobulin no proteinina whey lehibe any amin'ny bovine ronono kaonty manodidina ny 50% ny proteinina amin'ny whey nefa tsy hita amin'ny rononon'olombelona. β-Lactoglobulin dia mamolavola karazan-javatra sy fiasa ara-tsakafo maro isan-karazany izay nahatonga an'io proteinina io ho fitaovana fanatanjahantena betsaka ho an'ny fangatahana sakafo sy biochemical marobe.
Ny lafiny béta-Lactoglobulin
Ny soritr'aretin'ny fihetsikin'ny alerine amin'ny beta-lactoglobulin dia:
Redness na hives
Anaphylaxis (tsy fahita firy)
Beta-Lactoglobulin vovoka fampiasana
β-Lactoglobulin fitambaran'ny hafanana tafahoatra ho entin'ny mpanamory tavy polyunsaturated. Perez AA, Andermatten RB, Rubiolo AC, Santiago LG Food Chem. 2014 Sep 1; 158 (): 66-72.
Ny fanombanana ny rafitra sy ny alàlan'ny alàlan'ny alàlan'ny alim-bovine β-lactoglobulin dia voatsabo amin'ny fampielezana fanampiana amin'ny sonication. Yang F, Zou L, Wu Y, Wu Z, Yang A, Chen H, Li X. J Dairy Sci. 2020 Feb 26
Fandinihana Genomika ny sombin-tsolika vita amin'ny ronono any Brown Swiss Cattle. Macedo Mota LF, Pegolo S, Bisutti V, Bittante G, Cecchinato A. Biby (Basel). 2020 Feb 2